Author: Bralrajas Judal
KALA-GUUR Sida waafaqsan fastuurka iyo aad, Baarlamaanka fadaraalka Soomaaliya waxa uu soo jeedinayaa dhaqan-gelinayaana wax-ka-beddel ku aaddan Dastuurka ku meel-gaarka, hab waafaqsan heshiiskii ay ka wada-xaajoodeen Dowlladda Fedderaalka ah iyo Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee jira iyo kuwacusub, oo, balse aanan ku koobnaynqodobbadan soo socda: Xaqa Ka-qaybgalka Siyaasadda 1 Muwaaddin kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato arrimaha guud ee dadweynaha.
Dhaqangelidda Sharciyada Hindise sharci qabyo ah wuxuu dhaqan-gelayaa kaddib marka uu maro habraaca sharci- dejinta ee ku xusan qaybtan, Madaxweynaha Jamhuuriyadduna saxiixolaguna soo saaro Faafinta Rasmiga. Xaqa helidda macluumaadka 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo macluumaadka ay Dawladdu hayso.
Xigtada ugu dhow carruurta waa in sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogal ah loo war-geliyaa xiritaankooda. Xildhibaannadii golaha dastuhrka ee 9-kii bishan keenay mooshinka xil ka qaadista madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta ku celiyey in sidiisii u jiro mooshinka, iyaga oo madaxweynaha u soo jeediyey inuu u hoggaansamo sharciga.
Xildhibaannada qaar ayaa sidoo kale soo-jeediyey, in inta mooshinka xilka-qaadista ee xildhibaanadu soo gudbiyeen barlamaanku uga codaynayaan in uusan sameyn karin qodobada soo socda:.
Guddoomiyaha iyo Ku-xigeennada Golaha Shacabka Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool dasstuurka dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka.
Waajibaadka Caalamiga Ah Inta heshiiska wax waajibinaya ee jirey taariikhda uu Dastuurkan dhaqan gelayo uu waqtigiisu soomaaliyw ama wax laga beddelayo, waajibka heshiiskaa ka dhashey sidiisa ayuu u jirayaa Qodobka aad. Qiyamka Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah Dhaqanka iyo Afka 1 Dawladdu waa dastuhrka ay horumarisaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee Shacabka Soomaaliyeed, iyadoo ku dedaaleysa in ay bulshada ka suuliso caadooyinka haraaga ah iyo kuwa dhowaan-soo-baxa ah ee wax u dhimaya midnimada, ilbaxnimada iyo caafimaadka bulshada.
Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Notify me of new posts by email. Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Soomaaliya waa Jamhuuriyad federaal ah, leh gobannimo, dimoqraaddi ah, oo ku dhisan matilaadda dadweynaha, loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan iyo caddaalad dastuutka.
Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Sinnaanta 1 Muwaaddiniinta oo dhan, iyagoo aan loo eegin lab iyo dheddig, diin, xaalad bulsho ama dhaqaale, afkaar siyaasadeed, qabiil, naafannimo, xirfad, dhalasho iyo afguri toona, xuquuqda iyo waajibaadkaba waa u siman yihiin sharciga hortiisa.
Haddii Golaha Wasiiradu ay ansixiyaan, magacyada waxaa loo gudbinayaa Baarlamaanka Federaalka labada aqal Haddii Baarlamaanka Federaalka uu ansixiyo magacyadaas, waxaa osomaaliya gudbinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, si uu magacaabistooda xeer uga soo saaro.
Dhinaca kale qaar ka tirsan odayaashii dhaqanka Puntland ee dasthurka qaybgalay kulankii furitaanka shirwaynaha Isimada Somaalida ee Muqdisho ka dhacay ayaa dhowaan dib ugu laabtay magaalada Garowe iyagoo sheegay inay saluugeen hanaanka ay wax u socdaan. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa dasyuurka tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo dasstuurka Madaxweynaha. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Iskaashiga Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka Addoonsi, Midiidin iyo Ku-shaqaysi Qasab Ah Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka. Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka waa in ay doortaan labada Gole ee Baarlamaanka oo wada fadhiya, waxaana guddoominaya fadhigaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah.
Isucelinta Eedaysanayaasha iyo Dembiilayaasha 1 Isucelinta eedeysanayaasha iyo dembiilayaasha waxaa lagu oggolaan karaa oo keliya si waafaqsan sharciga, iyo in uu jiro heshiis isu-celin ah oo ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhinac ka dastuurkaa iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya Dawladda Federaalka Soomaaliyeed celinta eedaysanaha ama dembiilaha.
Fasiraadda Xuquuqda Asaasiga Ah Xubnaha garsoorku waxay u hoggaansamayaan oo keliya sharciga. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Author: Magis Galabar
Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka.
Wasiirka oo BBC-da u warramay ayaa tilmaamay in go’aanka ugu dambeeya ee dastuurka uu iska leeyahay golaha ansixinta hase ahaatee marka hore guddiga madaxa bannaan iyo guddiga khubarada ay soomaliya dhammaystiraan hawshaas oo uu wasiirku sheegay in xilligan ay soo afjarantay ayna hartay oo keliya talooyinkii madaxda sare iyo saxiixayaasha Road mapka oo keliya markaa kadibna dastuurku u gudbi doono golaha ansixinta.
A password will be e-mailed to you. You might also soomaalija More from author. Waxaa intaas dheer in dawlad goboleed kasta ay leedahay wasaarad dastuur iyo guddiyo Baarlamaan oo si gaar ah ay tahay inay dowr ku yeeshaan dib u eegista Dastuurka. Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha.
Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Sida aad ka arkeysaan farqiga u dhaxeeya Axdiga iyo ansixinta Kumeel gaarka ee la ansixiyey Dastuurkan, waxaa uu soo jiitamayey ilaa ilaa 8 sanno in la helo qabyo qoraalka Dastuurka aan hadda haysano.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa.
Shirweynaha qaran ee soconayo muddo seddax maalmood ayaa ah bilowga geeddi-socod looga gol leeyahay in Soomaaliya loo yeelo dastuur cusub kaasi oo beddeli doono Dastuurka Ku-meel gaarka ah oo ay isku raaceen ergo oo ka tirsan Golaha Ergooyinka Qaranka. Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan.
Guddigan oo loo yaqaan Guddiga La-socodka Dib-u-eegitsa Dastuurka ee Baarlamaanka ayaa la soconaya, tilmaamaya, islamarkaana ansixinaya howlaha Guddiga Madaxbannaan ee Dib-u-eegista Dastyurka, guddigaas oo uu dhisayo Qodobka si uu u sameeyo wax-ka-beddelka Dastuurka iyo qoris shuruucda.
Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa. Soomaaliy qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada dastuhrka. Safiirada qaramada midoobay u fadhiya dalalka USA, UK, France iyo Germany iyo ergeyga UN ee somalia iyo madaxweynaha dawladda KMG ee somalia intuba waxay isku raaceen in taageerada caalamku ay shardi u tahay sidii loo gaari lahaa bartilmaameedka August.
Wasiirka Arrimaha Dastuurka, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, ayaa ka hadlay taariikhda dastuur u sameynta Soomaaliya, oo sanadkii ka bilaabatay Jabuuti, kaddibna loo wareejiyay Nairobi, caasimadda dalka Kenya, ka hor inta aanan sanadkii kii la ansixin Dastuurka Ku-meel gaarka ah, oo loo maray Golaha Ergooyinka. Golaha dastuurkaa ee qaramada midoobay wuxuu cadeeyey walwal uu ka qabo in xukuumadda kmg ee somalia ay dib ug dhacday jadwalkii bishii ahaa in bisha August dalku uu yeesho dawlad rasmi ah oo joogta ah.
Prev Post Soomaaliya oo ka qeyb galeysa shir uu soo qaban qaabiyey Bangiga Adduunka. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Waxaa u ku baaqay in la sameeyo wadatashiyo ballaaran, kuwaasi oo natiijodoodu looga gol leeyahay in ay Soomaaliya u suurtageliso geeddi-socod siyaasadeed oo caddaalad ah islamarkaana loo dhan yahay.
Dastuurka Siomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo Balse waxaa jira xaqiiqo aanan ka qarin karin Bulshada Soomaaliyeed oo ah in aan weli wax la taaban karo la qabanin dhowr caqabadood darteed. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la dastuurkq.
Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka.
Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Mogadishu, 13 Maay — Soomaaliya ayaa maanta shirweyne qaran oo ka dhacay magaalada Muqdisho ku daah-furtay geeddi-socodka dib-u-eegista dastuurka.
Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Waxaa ay kala ahaayeen sidatan; DastuurkiiDastuurkiimidkii la diyaariyey iyo kan hadda aan haysano ee Madaxweyne Farmaajo oo shir ugu qeyb galaya dalka Itoobiya. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka.
Sida uu qabo Dastuurka sida KMG loo ansixiyey gaar ahaan qodobada 63aad iyo 71aad, awoodda wax ka bedelka Dastuurkan waxaa iska leh Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya labadiisa Aqal. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.
Baarlamaanka Federaalka waxaa uu doortey Guddi ka kooban 10 xubnood sida uu qabo qodobka aad ee Dastuurka. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Shirkaan waxaa ka soo qaybgaley xubnaha baarlamanka, culimada, bulshada rayidka iyo bah-wadaagta caalamiga ah.